Etu esi tinye mgbakwunye Chrome na Microsoft Edge Chromium | Akụkọ akụrụngwa
Microsoft weputara Microsoft Edge na Windows 10, ihe nchọgharị nke bịara n'echiche nke ịme Internet Explorer, ihe nchọgharị ahụ jiri aka igwe chịa site na ngwụsị afọ 90 ruo 2012, mgbe Google Chrome ghọrọ ihe nchọgharị kachasị eji eme ihe na ụwa karịrị Internet Explorer.
Ka ọtụtụ afọ gafere, ọchịchị nke Chrome na-aga n'ihu ma a na-achọta ugbu a n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 3 n'ime kọmputa 4 na-ejikọ na ịntanetị site na ihe nchọgharị. Na Edge, Microsoft ọ bụghị nanị na ọ chọrọ iji Internet Explorer mepee peeji ahụ, kamakwa ọ chọkwara bilie na Chrome. Ma o nweghị ihe ịga nke ọma.
Ka afọ na-aga, Microsoft ghọtara na ihe adịghị mma. Isi nsogbu Edge gosipụtara anyị, ọ bụghị naanị na anyị rụpụtara na arụmọrụ ya, kamakwa na enweghị ndọtị. Ọ bụ ezie na Edge dakọtara na ndọtị, ọnụọgụ ndị a pere ezigbo mpe, pere mpe ma ọ bụrụ na anyị jiri ya tụnyere ọnụọgụ dị na Chrome.
Nanị ihe ga-eme bụ iwulite ihe nchọgharị ọhụrụ site na ncha, ihe nchọgharị ọhụrụ sitere na Chromium, otu injin ahụ dị ugbu a na Chrome na Opera ebe Firefox na Apple si Safari jiri Gecko.
Na Jenụwarị 2020, Microsoft wepụtara nsụgharị ikpeazụ nke Edge ọhụrụ, ihe nchọgharị na-eweta mgbanwe dị oke mkpa ma e jiri ya tụnyere mbipute gara aga. Ọ bụghị nanị na ọ bụ ngwa ngwa, ma ọ na-enye anyị ụzọ dị iche iche iji gbochie nsuso nke anyị na dakọtara na mgbakwunye niile na anyị nwere ike ugbu a na Weblọ Ahịa Web Chrome.
1 Etu esi wụnye Microsoft Edge Chromium
2 Wụnye ndọtị na Microsoft Edge
3 Wụnye ndọtị Chrome na Microsoft Edge Chromium
4 Etu esi ewepụ ndọtị na Microsoft Edge Chromium
Etu esi wụnye Microsoft Edge Chromium
Bụ nsụgharị ọhụrụ nke Microsoft Edge, ihe nchọgharị nke etinyere n'ime Windows 10, ma ọ bụrụ na imelitela akwụkwọ nke Windows 10 gị, yikarịrị ka ị wụnyela ya na kọmputa gị. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ị nwere ike ịkwụsị ya naanị njikọ njikọ Iji budata ya na nkwa zuru oke, jikọọ na anyị hụrụ na ibe Microsoft gọọmentị.
Site na njikọ ahụ, ịnwere ike ibudata ụdị abụọ ahụ maka Windows 10, na mbipute maka Windows 7 na Windows 8.1 yana nsụgharị maka macOSEbe ọ bụ na mbipụta ọhụrụ a nke Edge dakọtara na sistemụ arụmọrụ desktọọpụ nke afọ 10 gara aga.
Mgbe m kwuru onye isi, ana m ekwu na ị ga-eme ya kpachara anya maka ibe weebụ niile na-ekwu na ọ ga-enyere anyị aka ibudata Microsoft Edge site na sava ha, dị ka a ga - asị na ha bụ ndị nwe ngwanrọ ahụ. Anyị ga-akpachara anya maka oge 99%, sọftụwia nrụnye gụnyere ngwa ndị ọzọ ga-etinye ma ọ bụrụ na anyị agụghị usoro niile ị ga-agbaso n'oge nrụnye.
Wụnye ndọtị na Microsoft Edge
Microsoft na-enye anyị usoro nke ndọtị ya nke gbakwunyere mwepụta nke ụdị Edge ọhụrụ dabere na Chromium, ndọtị anyị nwere ike ịchọta na Storelọ Ahịa Microsoft. Iji nweta site na ihe nchọgharị ahụ, anyị ga-enweta nhọrọ nhazi site na ịpị isi ihe atọ dị na elu aka nri nke ihe nchọgharị ahụ na ịhọrọ ndọtị.
Iji nweta site na ihe nchọgharị ahụ na ngalaba nke Storelọ Ahịa Microsoft ebe ndọtị ahụ dị, anyị ga-aga na kọlụm aka ekpe wee pịa Nweta ndọtị na Storelọ Ahịa Microsoft.
Mgbe ahụ ndọtị niile dị na Microsoft ga-egosipụta, ndọtị na ha agafeela ego nche site na Microsoft, dị ka ngwa niile dị na ngwa ngwa Microsoft. Na kọlụm aka ekpe, anyị na-ahụ edemede nke ngwa ndị ahụ ka egosipụtara na kọlụm aka nri ndị kwekọrọ na nke ọ bụla.
Iji wụnye nke ọ bụla n’ime ndọtị ndị a, anyị ga-pịa aha ya, na pịa bọtịnụ Get nke mere na ọ na-akpaghị aka wụnye na oyiri nke Microsoft Edge Chromium anyị. Ozugbo arụnyere, dị ka ọ dị na Chrome na Firefox na ndị ọzọ na ihe nchọgharị ahụ na-ekwe ka e tinye ndọtị, akara ngosi ya ga-egosipụta na njedebe nke ebe nyocha ahụ.
Wụnye ndọtị Chrome na Microsoft Edge Chromium
Iji wụnye ndọtị Chrome na Microsoft Edge ọhụrụ, anyị ga-ebu ụzọ nweta otu windo ahụ site na ebe anyị nwere ike iwunye ndọtị nke Microsoft n'onwe ya na-enye anyị. Na akụkụ aka ekpe nke windo ahụ, anyị ga-emerịrị ngbanwe ahụ Kwee ndọtị site na ụlọ ahịa ndị ọzọ.
Ozugbo anyị nyeere nhọrọ a, anyị nwere ike ịga na Chrome Web Store andchọta na ịwụnye ndọtị anyị chọrọ iji na akwụkwọ Microsoft nke dabeere na Chromium.
N'okwu a, anyị ga-aga n'ihu ịwụnye ndọtị Netflix Party, ndọtị na-enye anyị ohere ịnụ ụtọ otu ọdịnaya Netlix na ndị enyi anyị na-anọghị n'otu ebe. Ozugbo anyị nọ na peeji ndọtị, pịa Tinye na Chrome na anyị na-akwado nwụnye. Ozugbo arụnyere, anyị ga-ahụ ya na njedebe nke igbe ọchụchọ. Anyị ekwesighi ịbanye na akaụntụ Google anyị iji wụnye ndọtị na Edge Chromium.
Etu esi ewepụ ndọtị na Microsoft Edge Chromium
Iji kpochapụ ndọtị ndị anyị tinyeburu na Microsoft Edge, anyị ga-enweta nhọrọ nhazi ma tinye ngalaba Extensions. N'ime ngalaba a, ndọtị niile anyị tinyeburu, ma ha bụ ndọtị nke Microsoft ma ọ bụ ndọtị sitere na Weblọ Ahịa Chrome.
Usoro iji kpochapụ ha na kọmputa anyị bụ otu, ebe ọ bụ naanị na anyị ga-aga ndọtị iji kpochapụ na pịa Wepụ (nke dị n'okpuru aha ndọtị ahụ) na-akwado nhichapụ na nzọụkwụ ọzọ. Nhọrọ ọzọ Edge Chromium na-enye anyị bụ ịkwụsị mgbatị ahụ.
Ọ bụrụ na anyị kwụsị ndọtị ahụ, ọ ga-akwụsị ịrụ ọrụ na ihe nchọgharị anyị, agaghi egosipụta akara ngosi ya na ngwụcha igbe nchọta ahụ, mana ọ ka ga-adị iji rụọ ọrụ ya mgbe anyị chọrọ ya. Nhọrọ a dị mma iji nwalee ma ọ bụrụ na ndọtị ọ bụla nke anyị arụnyere na kọmputa anyị n'oge na-adịghị anya bụ ihe kpatara nsogbu ndị enyere.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara usoro a, egbula oge ịhapụ ya na nkwupụta ma anyị ga-eji obi ụtọ Aga m enyere gị aka idozi ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Kọmputa » Etu esi tinye ndọtị Chrome na Microsoft Edge Chromium
Ihe enyemaka iji nwee ike ịgbanye ekwentị